डचटाउन र दक्षिण पक्ष भोटिंग जानकारी • डचटाउनस्टा.लि.
डचटाउन निर्णय: भोट!
डचटाउन मतदाताहरूको लागि जानकारी
सबैका लागि मतदान जानकारी
प्रयोग गर्नुहोस् अनुवाद माथिको मेनूमा बटन वा हाम्रोमा जानुहोस् अनुवाद पृष्ठ स्प्यानिश, भियतनामी, अरबी, नेपाली, र अधिकमा मतदान जानकारी प्राप्त गर्न।
सँग साझेदारीमा डचटाउन जस्टिस एलायन्स, हामीले डचटाउन वरपरका मतदाताहरूको लागि केही महत्त्वपूर्ण जानकारी भेला गरेका छौं।*
सेन्ट लुइसको सब भन्दा ठूलो र अधिक जनसंख्या भएको ठाउँका रूपमा हाम्रा छिमेकीहरूले स्थानीय चुनावमा शक्तिशाली प्रभाव पार्न सक्दछ किनकि डचटाउनमा हामी हजारौं मतदाताहरू सशक्त छौं। उम्मेदवारलाई मतदान गर्न एकसाथ आएर र हाम्रो समुदायलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराको मुद्दामा, हामी शक्ति संरचना परिवर्तन गर्न र हाम्रो छिमेकीको लागि राम्रो काम गर्न नीतिलाई प्रभाव पार्न सक्दछौं।
डचटाउन द्वारा भिडियो निर्णय गर्दछ क्रस ग्रान्ड.
तपाईको मतदान गर्ने ठाउँ खोज्नुहोस्
जान जानु अघि जानुहोस्
अनुमोदन मतदान के हो?
नयाँ स्वीकृति मतदान प्रणालीको साथ, सेन्ट लुइसियन्सले उनीहरूको मतदान गर्ने बानी समायोजन गर्न आवश्यक छ। मार्च र अप्रिल दुबैमा मतदान देखाउनु पहिले भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ।
अनुमोदन मतदान एउटा चुनावी प्रणाली हो जहाँ मतदाताले कुनै पनि मनपर्दो उम्मेद्वारहरू चयन गर्न सक्दछ, एउटा मात्र नभई। नोभेम्बर २०२० को चुनावमा मतदाताहरूले प्रस्ताव डीलाई ठूलो समर्थन गरेपछि नयाँ स्वीकृति मतदान प्रणालीलाई अनुमोदन गरे।
सेन्ट लुइसमा स्वीकृति मतदान कार्यान्वयन भैसकेपछि हामीसँग दुईवटा नगरपालिका चुनाव हुनेछ — एउटा मार्चको प्राथमिक चुनाव र अप्रिलमा आम चुनाव। प्राथमिक जहाँ तपाईं उम्मेद्वारहरूलाई "अनुमोदन" गर्नुहुन्छ र आम चुनावमा जानुपर्दछ, जुन एक रन-आउट निर्वाचन जस्तो कार्य गर्दछ।
मार्च प्राथमिक चुनाव
प्राथमिक निर्वाचनको बखत, तपाईं कुनै पनि र सबै उम्मेद्वारहरूका लागि मतपत्र दिन सक्नुहुन्छ जुन तपाईं स्वीकृत गर्नुहुन्छ। एक, दुई, सबै, वा, कुनै पनि हैन - र जसलाई पनि तपाईले छान्नु हुन्छ तपाईमा निर्भर हुन्छ। तपाईका छनौटहरूले अनिवार्य रूपमा प्राथमिकता जनाउँदछ, वा कि तपाई यी उम्मेदवारहरूको आम चुनावको अनुमोदन गर्नुहुन्छ। श्रेणीकृत विकल्प भोटिंग प्रणालीको विपरीत, तपाईंको सबै अनुमोदनहरूमा समान वजन हुन्छ।
नयाँ अनुमोदन मतदान प्रणाली अन्तर्गत, पार्टी सम्बद्धता हटाइएको छ। प्राथमिक निर्वाचन अब कट्टरपन्थी नभएको कारण तपाईले पोलकर्मीलाई कुन कुन मतपत्र चाहिन्छ भनेर बताउनुहुन्न — सबैको आ-आफ्नै विकल्प छ र उही मतपत्र हुन्छ। यद्यपि धेरै उम्मेद्वारहरु अझै पनी उनीहरुको पार्टी पत्यारपत्रहरु को लागी tout, तपाइँले मतपत्र मा प्रजातान्त्रिक वा रिपब्लिकन लेबल देख्न छैन।
अप्रिल आम चुनाव
दुई उम्मेद्वारहरू जो अप्रिलमा आम चुनावमा प्राथमिक चालमा सबैभन्दा बढि स्वीकृति पाउँछन्। क्षेत्र दुई दुई मात्र संकुचित भएपछि, बहुमत (%०% + १) जित्नु आवश्यक छ। सामान्य चुनावमा तपाईले एक जना उम्मेदवार छान्नु पर्छ। र अधिक मतको साथ उम्मेदवार अफिस लिनको लागि अघि बढ्छ।
यो कसरी काम गर्‍यो
यस अघि सेन्ट लुइसमा नगरपालिकाको चुनावमा मार्चमा कट्टरपन्थी प्राथमिक निर्वाचन हुन्थ्यो र त्यसपछि अप्रिलमा आम चुनाव हुन्छ। तपाईले आफ्नो मनपर्ने पार्टी (लोकतान्त्रिक, रिपब्लिकन, आदि) को लागी मतपत्रका लागि सोध्नु हुन्छ र त्यसपछि आम चुनावमा कुन पार्टी उम्मेदवार तपाईको पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने छनौट गर्नुहोस्।
सेन्ट लुइसमा डेमोक्र्याटप्रति अत्यधिक झुकावको कारण (शहरका सबै निर्वाचित अधिकारीहरू डेमोक्र्याट हुन्), धेरै मानिसहरूले प्राथमिक निर्वाचनलाई “" चुनाव "ठाने। जुनसुकै उम्मेदवारले डेमोक्र्याटिक प्राइमरी जित्यो अप्रिलको आम चुनावमा कम वा कुनै प्रतिस्पर्धाको सामना गर्ने छ। त्यस्तै, अप्रिलको चुनावमा मतदान सामान्यतया मार्च प्राथमिक भन्दा धेरै कम थियो।
तयार होउ! उम्मेद्वारहरू अध्ययन गर्नुहोस् र निर्णय लिनुहोस् कि तपाईंको स्वीकृति को योग्य छ। धेरै मतदाताहरूलाई मार्गदर्शन गर्न पार्टी सम्बद्धता बिना, तपाईंले उम्मेद्वारहरूको नाम जान्नुपर्दछ र उनीहरूले त्यो नीतिहरू समर्थन गर्नुहुन्छ भनेर निश्चित गर्नुपर्दछ।
पोलमा धैर्य राख्नुहोस्! दिमागमा राख्नुहोस् कि अनुमोदन मतदान प्रणाली अपेक्षाकृत नयाँ छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले कसलाई मतदान गर्दै हुनुहुन्छ बुझ्नुभयो, र तपाईंको साथी मतदाताहरूलाई पनि समय दिनुहोस्। जब तपाईं पोलमा जानुहुन्छ केही थप मिनेटको लागि योजना बनाउनुहोस्।
स्थिर रहनुहोस्! तपाईंले मार्चमा मतदान गर्नुभएको हुन सक्छ, तर अप्रिलको चुनावले नयाँ महत्व र मूल्य राख्दछ। प्रत्येक र हरेक चुनावको लागि पोल देखाउनुहोस्।
सामग्रीको तालिकामा फर्कनुहोस्.
तिमी सक्छौ तपाईको मतदान गर्ने ठाउँ खोज्नुहोस् चुनाव बोर्डको वेबसाइटमा। तपाईंको मतदान स्थान पनि चुनाव सूचना पोस्टकार्डमा सूचीबद्ध हुनेछ जुन तपाईंले चुनाव हुनु अघि मेलमा प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
ग्रेटर डचटाउन छिमेकमा मतदान केन्द्रहरू
डचटाउनमा एल्डर्मनिक वार्डहरू।
तल सूचीकृत स्थानहरू मतदान स्थानहरू हुन् जुन हाम्रो छिमेकको अधिकांश सेवा गर्दछ। निश्चित गर्नुहोस् तपाईंको मतदान स्थान प्रमाणित गर्नुहोस् शहरको वेबसाइटमा तपाईंको ठेगाना हेरेर।
मतदान स्थानहरू बिहान6देखि साँझ7सम्म खुल्ला छन्।
छिमेकी इनोवेशन केन्द्र, 3207 Meramec स्ट्रीट
GRbic बैन्क्वेट हल, 4071०१XNUMX केओकुक स्ट्रिट
फ्रोबेल इलिमेन्टरी स्कूल, 3709 XNUMX० Ne नेब्रास्का एवेन्यू
मेरामेक एलिमेन्टरी स्कूल, २2745। मेरामेक स्ट्रिट
Gambrinus हल, 3650 XNUMX० विस्कॉन्सिन एवेन्यू
थॉमस डन लर्निंग सेन्टर, 3113११XNUMX ग्यासकनाड सडक
वुडार्ड एलिमेन्टरी स्कूल, 725२। बेलेराइभ बुलेभार्ड
ल Middle्ग मिडिल स्कूल, 5028०२XNUMX मोर्गन फोर्ड रोड
नवौं, ११ औं र १th औं वार्डहरू छन् थप मतदान स्थानहरू यसले सामान्यतया ग्रेटर डचटाउन वरपरका क्षेत्रहरू सेवा गर्दछ। फेरि, निश्चित गर्नुहोस् तपाईंको मतदान स्थान हेर्नुहोस् निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं सहि स्थानमा जाँदै हुनुहुन्छ।
फोटो आईडी आवश्यक छैन! मतदान ठेगानाको साथ एक पेचेक स्टब वा वर्तमान उपयोगिता बिल स्वीकार्य छ।
यदि तपाईंसँग सीमित गतिशीलता छ भने तपाईं "कर्बसाइड" वा मतदान स्थान बाहिर मतदान गर्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो मतदान गर्ने ठाउँमा जानुपर्नेछ र कसैलाई भित्र पस्न भनियो र पोल कार्यकर्ताहरुलाई तपाईलाई मतपत्र दिन लाउनुहोला। पोल कार्यकर्ताहरूले तपाइँलाई एक उचित समय भित्र एक मतपत्र ल्याउनु पर्छ।
यदि तपाईं चुनावमा फर्कनुभयो कुनै पनि कारणका लागि, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि चुनाव न्यायाधीशहरूले शहर निर्वाचन बोर्डलाई कल गरे। यदि तिनीहरूले अझै पनी पुष्टि गर्न सक्दैनन् कि तपाईं मतदान गर्न सक्षम हुनुहुन्छ, ती अझै पनि कानुनी रूपमा तपाईंलाई एक अस्थायी मतपत्र प्रस्ताव गर्न आवश्यक छ। एक अस्थायी मतपत्र स्वीकार्नु अघि, कल १-1। - हाम्रो - भोट (१-1-866-687) विकल्पहरू छलफल गर्न।
यदि तपाईं एक दुर्व्यवहार वा दुर्व्यवहार को दोषी साबित गरीएको छ, तर तपाइँले आफ्नो सजाय पूरा गर्नुभयो (प्रोबेशन वा प्यारोल सहित), तपाईं भोट दिन योग्य हुनुहुन्छ, तर पुन: दर्ता गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईंलाई चिनेको कोही प्रि-ट्रायल हिरासतमा जेलमा छ भने, उनीहरूलाई अनुपस्थिति दिने अधिकार छ।
पहिलो पटक मतदाता
यदि तपाईं पहिलो पटक मतदान गर्नको लागि दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंको दर्ता फारमको अतिरिक्त, तपाईंले एक प्रकारको पहिचान प्रदान गर्न पनि आवश्यक छ। आईडी को स्वीकार्य फार्महरु समावेश:
जन्मदर्ता प्रमाण पत्र
अनुप्रयोगको बाकस In मा, तपाईं "नयाँ दर्ता" बक्स जाँच गर्नुहुनेछ।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले बक्स in मा तपाईंको वास्तविक घर ठेगाना प्रदान गर्नुहुन्छ। यदि तपाईंको मेलिing ठेगाना फरक छ भने, तपाईं त्यो जानकारी बाकस in मा प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको दर्ता अपडेट गर्दै
यदि तपाईं अन्तिम पटक मतदान गर्नका लागि दर्ता गर्नुभयो भने, तपाईं आफ्नो मतदाता दर्ता अपडेट गर्न आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईं सेन्ट लुइसको शहर भित्र जानुभएको छ भने, बाकस in मा तपाईंले “ठेगाना परिवर्तन” बाकस जाँच गर्नुहुनेछ। यदि तपाईं अर्को क्षेत्राधिकारबाट सर्नुभयो (उदाहरणका लागि: सेन्ट लुइस काउन्टीबाट सेन्ट लुइस शहरमा सर्नुभयो), तपाईंले बक्स in मा “नयाँ दर्ता” जाँच गर्नु पर्छ। यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न भने, “नयाँ दर्ता” जाँच गर्नुहोस्।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले बाकस in मा तपाईंको वास्तविक घर ठेगाना प्रदान गर्नुहुन्छ। यदि तपाईंको मेलिing ठेगाना फरक छ भने, तपाईं त्यो जानकारी बाकस in मा प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बक्स १२ मा, तपाईंलाई ठेगाना प्रदान गर्न सोधिनेछ जहाँ तपाईं पहिले मतदान गर्न दर्ता हुनुभएको थियो।
यदि तपाईंसँग ड्राइभर इजाजतपत्र छ भने, तपाईंले आफ्नो इजाजतपत्र नम्बर बक्स 7. मा प्रविष्ट गर्नु आवश्यक छ। यदि तपाईंसँग सामाजिक सुरक्षा नम्बर छ भने, तपाईंले तपाईंको एसएसएनको अन्तिम चार अंक बक्स enter मा प्रविष्ट गर्नु आवश्यक छ। तपाईंले आफ्नो मिति प्रविष्टि गर्नु आवश्यक छ। बक्स 8 मा जन्म।
तपाईंको जन्म स्थान र फोन नम्बर (बक्स १० र बक्स ११) आवश्यक छैन।
बक्स १ In मा, स्वीकार गर्नुहोस् कि तपाईले उपलब्ध गराउनु भएको जानकारी सहि छ, तब हस्ताक्षर गर्नुहोस् र तपाईंको आवेदन मिति दिनुहोस्।
कहाँ दर्ता गर्न
तिमी सक्छौ तपाइँको दर्ता स्थिति जाँच गर्नुहोस् or मतदान गर्न दर्ता गर्नुहोस् मिसौरी सेक्रेटरी स्टेटको वेबसाइटमा।
तपाईं एक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ पीडीएफ मतदाता पंजीकरण आवेदन सेन्ट लुइस वेबसाइटको शहरबाट, त्यसपछि फारम प्रिन्ट गर्नुहोस् र मेल गर्नुहोस्।
वा तपाईं निम्न स्थानहरूमा व्यक्तिमा दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ:
सेन्ट लुइस चुनाव बोर्ड
मोटर सवारी को राजस्व विभाग (लाइसेन्स कार्यालयहरू / DMVs)
सेन्ट लुइस सार्वजनिक पुस्तकालय स्थानहरू
निष्क्रिय मतदाता सूची
तपाईं प्रमाणिकरण गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं हुनुहुन्छ छैन माथि निष्क्रिय मतदाता सूची। यदि चुनाव बोर्डले तपाईंको ठेगाना प्रमाणित गर्न सक्दैन भने, तपाईं सूचीमा अन्त्य हुन सक्नुहुन्छ। तपाईं सूचीमा हुनुहुन्छ वा छैन भनेर जाँच गर्न, चुनाव बोर्डको वेबसाइटको भ्रमण गर्नुहोस्.
तपाईंलाई भोट दिन अनुमति छ, यदि तपाईं निष्क्रिय मतदाता सूचीमा हुनुहुन्छ भने पनि। केहि अतिरिक्त चरणहरू आवश्यक पर्दछ जब तपाईं मतदान गर्न जानुहुन्छ, त्यसैले कृपया आफैलाई थप समय दिनुहोस्।
निर्वाचनको दिनमा नियमित मतदान स्थानमा जान नसक्ने आशा गर्ने मतदाता अनुपस्थित मतपत्रका लागि आवेदन दिन योग्य छन्। मतदान अनुपस्थितिका लागि स्वीकार्य कारणहरू समावेश:
चुनाव दिनमा अनुपस्थिति
असक्षमता वा सीमितता बिरामी वा अशक्तताको कारण
धार्मिक विश्वास वा अभ्यास
निर्वाचन प्राधिकरणको रूपमा रोजगार (अभियान कार्यकर्ताहरूमा लागू हुँदैन)
कैदमा राखिएको छ (मतदानका लागि सबै योग्यताहरू राखिएका छन्)
तिमी सक्छौ अनुपस्थित मतदान आवेदन डाउनलोड गर्नुहोस् र थप निर्देशनहरू खोज्नुहोस् शहर को वेबसाइट मा।
अनुपस्थित मतपत्रहरू ब्यक्तिगत रूपमा वा चुनावमा बोर्डमा पेश गर्न सकिन्छ। भ्रमण गर्नुहोस् चुनाव बोर्डको वेबसाइट पूर्ण विवरणका लागि।
* यस वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको जानकारी कुनै पनि हिसाबले कुनै पनि उम्मेद्वार, राजनैतिक दल, वा डीटी २ ball डाउनटाउन डचटाउन, डचटाउन कम्युनिटी इम्प्रूभ्युमेन्ट डिस्ट्रिक्ट, वा अन्य कुनै संगठनको समर्थन, वा विरोधको प्रतिबिम्बित गर्ने उद्देश्यले होइन। यो जानकारी मतदाता शिक्षाको उद्देश्यका लागि कडाईका साथ प्रदान गरिएको छ। शीर्ष मा फिर्ता.
द्वारा शीर्ष फोटो पल सेबलम्यान.
यस पृष्ठ साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पृष्ठ अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो अप्रिल 22nd, 2021 .
डचटाउन STL.org डचटाउन निर्णय: भोट!